I-Mauna Lani Resort- Deluxe Accommodations/Breakfast - I-Airbnb
I-Mauna Lani Resort- Deluxe Accommodations/Breakfast
Mauna Lani , Hawaii, i-United States
Ikamelo e-i-townhouse ibungazwe ngu-Jeanette
Igumbi leDeluxe, ukugeza okugcwele kanye nokusetshenziswa kwangasese kwegumbi lokuhlala kanye ne-lanai esitezi esikhulu ekhaya ledolobha elihle, endaweni esesangweni yaseKulalani, eduze kweFairmont Orchid Hotel. Kubandakanya ukudla kwasekuseni kwansuku zonke kanye nama-cocktails amukelekile. Hlala endaweni yokuqala yeholide yolwandle e-Big Island ngokufinyelela ezintweni ezimangalisayo, njenge-Beach Club yabanikazi bezindlu yangasese, amachibi okubhukuda ayimfihlo amabili amahle kanye nesikhungo sokuzilolonga esihlonyiswe kahle. Eduze nolwandle, isitolo segrosa, izitolo nezinye zezindawo zokudlela ezihamba phambili.
Ukunethezeka okuvelele kombhede omkhulu wase-California, imicamelo eminingi kanokusho kanye namashidi ekhwalithi ephakeme ye-deluxe. Indlu yokugezela yangasese egcwele, esezingeni eliphezulu. Isidlo sasekuseni esihle, esikhulu sifakiwe futhi silungiselelwe wena njalo ekuseni. Vele ushaye inkinobho yekhofi elisanda kukhiwa! Siphinde sihlinzeke ngohlobo lwamatiye, ijusi ewolintshi, amaqanda, ama-yogurts, i-granola, ama-croissant, ama-muffins, ama-Denmark, ama-Belgium waffles nama-maple kanye nama-syrups, i-croissant breakfast sandwiches neqanda, ushizi nesoseji, ama-bagels ahlukahlukene anoshizi we-cream, kanye nohlobo lwamajamu nama-honeys endawo. Isidlo sasekuseni samahhala njalo ekuseni ku-lanai yakho yangasese siyathandwa kakhulu nezivakashi!
Izivakashi zingasebenzisa yonke indawo yaphansi, ehlanganisa ikhishi, nokusetshenziswa kuphela kwekamelo lokudlela, igumbi lokuphumula, ne-lanai enkulu, ngaphezu kwegumbi lazo lezivakashi negumbi lokugezela. (Azikho ezinye izivakashi phakathi nokuhlala kwakho, njengoba kunjalo nezinye izindlu e-Mauna Lani ezinikeza ikamelo ekhaya, kodwa ziqashisa ngamakamelo amaningi. Ngakho qiniseka ukuthi uhlola.) I-lanai enhle futhi ekhululekile imise okotshani, enokhaphethi, kanye nemidwebo yasekuqaleni. Inefenisha yezihlalo zezandla enezindawo zokuhlala zezinyawo endaweni eyodwa, kanye netafula lokudlela nezihlalo kwenye indawo. Iphinde ibe ne-grill yegesi ye-Viking, usinki, kanye namatafula e-granite kanye nekhabethe endaweni yokudlela. I-lanai yenza isethingi ekahle kakhulu yama-cocktail akho okwamukela mahhala kanye nokudla okulula. Futhi iyindawo ejabulisayo yokubuka izinyoni (ungazondla) noma ukuhlala futhi ufunde. Futhi jabulela i-TV yekamelo, noma i-TV engu-55 '' enamashaneli angaphezu kuka-100, kuhlanganise ne-Netflix, egumbini lokuphumula, futhi, i-inthanethi enejubane elikhulu.
Indawo yaphansi iyimfihlo. Lihlanganisa i-master suite yethu, ihhovisi, kanye ne-lanai yethu ehlukile. Yilapho sisebenza khona futhi sidle futhi sichithe isikhathi sethu uma sisekhaya.
Ukunikezwa kwethu kuhlukile futhi ukuphela kohlobo lwayo e-Mauna Lani. Akuyona ikamelo lokulala endlini yasedolobheni lapho amakamelo okulala amaningi aqashiswa khona. Lolo hlobo lwendawo yokuhlala luyisitayela se-dormitory, nezivakashi ziza futhi zihamba, zingena futhi ziphume, zisebenzisa ibhokisi lesikhiye phakathi nokuhlala kwakho, nokwabelana ngezindawo zomphakathi nabantu abangaziwa. Lokho akukhona lokho esikwenzayo. Futhi akuyona indlu yonke yedolobha enamakamelo okulala amaningi, angasetshenzisiwe, ngezindleko eziphakeme, ngaphandle kosizo lomuntu siqu olutholakalayo. Izindawo zethu zokuhlala zinikeza ubumfihlo obukhulu futhi zilungele umbhangqwana nje owodwa. Ukuphela kokunikezwa kohlobo lwayo kwi-resort yase-Mauna Lani.
*Ngenxa yokuthi ngezikhathi ezingavamile siye sabuzwa ukuthi singakwazi yini ukwamukela umuntu wesithathu, sithenge umbhede wesitayela se-Temperpedic ukuze sikwazi ukwenza kanjalo ngesicelo esikhethekile. Ukukhokhiswa komuntu wesithathu kunjengoba kushiwo engxenyeni efanele yale ndlu.
4.96 · 339 okushiwo abanye
Ngokuvumelana nesibuyekezo sesivakashi, ikhaya lethu:
"isendaweni enhle, eduze nokufika esikhumulweni sezindiza sase-Kona, eKailua-Kona,
Waimea, kanye nomgwaqo oya eMauna Kea Observatory, Hilo kanye neVolcano. I
Indawo yokuphumula lapho ukufakwa kuhlu kutholakala khona inikeza konke okudingayo kusuka
igilosa olwandle oluyimfihlo. Kungakhathaliseki ukuthi abasanda kushada noma umbhangqwana abanokuhlangenwe nakho nje
ufuna ukuphumula nokuphumula endaweni eyodwa, ungakuthola lapha. "
Sithanda ukusiza izivakashi zethu nganoma iyiphi indlela esingayenza, njengokuhlinzeka ngamathiphu nemininingwane yomuntu siqu ukuze senze ukuvakasha kwazo e-Big Island kube yimpumelelo futhi kukhumbuleke ngangokunokwenzeka. Sifuna izivakashi zizizwe zisekhaya, futhi silwela ukunikeza izivakashi zethu ubumfihlo obukhulu. Ngakho-ke, izihambeli eziningi zisibona kuphela lapho singena, lapho sibamukela futhi sizinikeza ukwaziswa nosizo---- futhi nalapho siphuma. Kodwa sihlala sikhona ukuze sinikeze usizo noma iseluleko. Izivakashi zinesevisi yazo ye-concierge etholakala amahora angu-24/ngosuku :-)
Sithanda ukusiza izivakashi zethu nganoma iyiphi indlela esingayenza, njengokuhlinzeka ngamathiphu nemininingwane yomuntu siqu ukuze senze ukuvakasha kwazo e-Big Island kube yimpum…
Inombolo yepholisi: GE-113-789-5936-01 TA-113-789-5936-01
Hlola ezinye izinketho ezise- Mauna Lani namaphethelo